कपिलवस्तुमा चुनाव रोचक बन्दै,बामगठबन्धन र नेपाली कांग्रेसबीच कडा प्रतिष्पर्धा Nepali Report
कपिलवस्तुमा चुनाव रोचक बन्दै,बामगठबन्धन र नेपाली कांग्रेसबीच कडा प्रतिष्पर्धा
Posted By: NR DESK	November 24, 2017
घरदैलोमार्फत मतदाता रिझाउन उम्मेदवार व्यस्त
प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको दोस्रो चरणको निर्वाचन नजिकिएसँगै कपिलवस्तुमा चुनावी रौनक छाएको छ । यही मंसिर २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्न यतिबेला उम्मेदवारहरु लागिपरेका छन् ।
प्रदेश नं ५ मा अन्तर्गत जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ का प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका उम्मेदवार विभिन्न भेला, सभा, घरदैलो लगायतका चुनावी प्रचारप्रसारमार्फत मतदाता रिझाउन व्यस्त छन् । यस पटकको निर्वाचनमा केही पुराना त केही नयाँ अनुहार चुनावी मैदानमा छन् । क्षेत्र नं. ३ मा विशेष गरी बामगठबन्धन, नेपाली कांग्रेसबीच कडा टक्कर हुने देखिन्छ । तर यहाँ संघीय समाजबादी फोरम नेपाल, राजपा र बहुजनशक्ति पार्टीका उम्मेदवारले पनि बामगठबन्धन र कांग्रेसलाई टक्कर दिइरहेका छन् ।
राजपा छाडेर बामगठबन्धनबाट एमालेको सूर्य चुनावचिन्ह लिएर प्रतिनिधिसभा सदस्यमा पूर्व राजइमन्त्री ईश्वर दयाल मिश्र चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । विकासप्रेमी छवि बनाए® जनताको बीचमा लोकप्रिय रहेका मिश्र २०४९ मा स्थानीय निकायको निर्वाचनमा कुशहवा गाविस अध्यक्ष जिते® आफ्नो ®ाजनीतिक सुरुवात ग®ेका थिए । भा®तको लखनऊबाट स्नातकसम्म अध्ययन पूरा गरेका ५३ बर्षीय मिश्र मधेश आन्दोलनको नेतृत्व लिँदै २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा तमलोपाबाट निर्वाचित बनेका थिए । बाबु®ाम भट्ट®ाई नेतृत्वको स®का®मा भौतिक निर्माण योजना ®ाज्यमन्त्री बनेका मिश्र यस क्षेत्रका विकासप्रेमी नेताको रूपमा चिनिन्छन् । मतदातामा आफ्नो छुट्टै पकड भएका मिश्र बाम गठबन्धनबाट उम्मेदवा® भएपछि त्यस क्षेत्रमा उनी बलियो प्रतिस्पर्धीका रूपमा उभिएका हुन् ।
मिश्रलाई टक्कर दिंदै संघीय समाजबादी फोरम नेपाल परित्याग गरी नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका अभिषेक प्रताप शाह ‘रुख’ चिन्ह लिएर प्रतिनिधिसभा ३ बाट चुनावमा होमिएका छन् । नेपालकै कान्छा सभासदको प®िचय बनाएका शाह २४ बर्षकै उमे®मा राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन् । २०३९ सालमा जन्मिएका शाह भा®तको गो®खपु®बाट मावि ® लखनऊबाट व्यवस्थापन संकायबाट स्नातक तहसम्म अध्ययन ग®ेका छन् । ®ाप्रपा छाडे® मधेश आन्दोलनको अगुवाई गर्दै फो®म प्रवेश ग®ेका शाह २०६४ ® २०७० ग®ी २ पटक संविधानसभा सदस्य जितेका थिए । फो®मबाट जित्ने अवस्था नदेखेपछि उप–महासचिव पद छाडे® उनी १ महिनाअघि मात्रै कांग्रेस प्रवेश गरी कपिलवस्तु प्रतिनिधिसभा ३ बाट प्रतिष्पर्धामा उत्रिएका छन् ।
गत स्थानीय तहको निर्बाचनमा पाएको मत परिणामको आधारमा दलहरुले चुनाव जित्ने जोडघटाउ गरिरहेका छन् । स्थानीय तहको निर्बाचनमा संयुक्त बामगठबन्धनको पक्षमा २२ हजार ४ सय ७६ मत र लोकतान्त्रिक गठबन्धनको पक्षमा १९ हजार १ सय १६ मत देखिन्छ । यसरी जोडघटाउ गर्दा बामगठबन्धन ३ हजार ३ सय ६० मतले अगाडि देखिन्छ ।
यता समाजवादी फोरममा रहँदा युवा नेता अभिषेक प्रताप शाहले स्थानीय स्तरमा प्रभाव छोडेकाले राम्रो मत पाउने विश्लेषकहरु अनुमान गर्छन् । अर्कोतर्फ बामगठबन्धनका उम्मेदवार ईश्वरदयाल मिश्र राज्यमन्त्री हुँदा छोटो समयमा विकास निर्माणका काममा ठूलो योग्दान दिएकाले र बामगठबन्धनको मतपरिणामका आधारमा मिश्रले जित्ने आँकलन गरिन्छ । अर्कोतर्फ मधेशबाट संघीय समाजबादी फोरमका मंगलप्रसाद गुप्ता, बहुजनशक्ति पार्टीका एहसान अहमद खान र राजपाका उम्मेदवार नरसिंह चौधरीको आफ्नै किसिमको प्रभाव भएकाले मधेशको मत बाँडिने देखिन्छ । यसले गर्दा पनि बामगठबन्धनले राम्रो मत ल्याउने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
यसैगरी निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ अन्तर्गत प्रदेशसभा १ मा पनि बामगठबन्धन र नेपाली कांग्रेसबीच नै रस्साकस्सी हुने देखिन्छ । प्रदेशसभा १ मा बामगठबन्धनका उम्मेदवार युवा नेता अर्जुनकुमार के.सी. र नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार युवा नेता अजय थापाको आ–आफ्नै पकड रहेको छ । यता प्रदेशसभामै मेधशमा राम्रो पकड बनाएका राजपाका युवा नेता रविदत्त मिश्र ‘राजगुरु’ को पनि आफ्नै पहिचान छ । उनी पनि टक्करमा आउने देखिन्छन् । भने पूर्व गाविस सचिव रहेका संघीय समाजबादी फोरम नेपालका प्रदेशसभा उम्मेदवार कृष्णकुमार चौधरीको पनि समाजमा आफ्नै छवि छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा चौधरीले राम्रो मत ल्याएका थिए । यसरी मधेशबादी दलका उम्मेदवारहरुको पनि आ आफ्नै पहिचान रहेकाले उनीहरुले पनि राम्रो मत ल्याउने देखिन्छ । तर समग्र मतपरिमाणको आधारमा बामगठबन्धन र नेपाली कांग्रेसबीच नै बढी टक्कर देखिन्छ ।
यता प्रदेशसभा २ मा पनि उस्तै प्रतिष्पर्धा रहेको देखिन्छ । बामगठबन्धनबाट उम्मेदवारी दिएका जाबेद आलम खाँ, नेपाली कांग्रेसका बीरेन्द्र कनौडिया, संघीय समाजबादी फोरम नेपालका सैलेश प्रताप शाह, स्वतन्त्र उम्मेदवार जानकी प्रसाद यादव, राजपाका रामप्रकाश चौधरी (बड्कू) को आ आफ्नै पहिचान रहेकाले निकै टक्कर हुने देखिन्छ । तर समग्र मतलाई आँकलन गर्दा बामगठबन्धनका जाबेदकै पकड राम्रो रहेको विश्लेषकहरुको ठहर छ ।
Previous article स्वतन्त्रताका लागी काग्रेसलाई भोट ः शतिm
Next article ज्ञानपुञ्च महिला सहकारीको साधारणसभा सम्पन्न,महिलाको आर्थिक समृद्धिका लागि बचत सहकारी